5 Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Waqtiga ayaa ugu dambeyntii yimaado – haddii aad hadda jaamacad ka qalin jabiyay, waxaa cinwaan maqnaan aad fasaxa sannadlaha ah, ama go'aansaday in jaceylka ee safarka, dhulkiinnu midho ma lagu waayi karaa, aad dooratay in ay u safraan Europe tareen. Waa fikrad ka taataabtay, a trek traveled by…
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 11 daqiiqo France ayaa muddo dheer u jecel iyo mid ka mid ah meelaha ugu dalxiis loo jecel yahay in Europe. Marka la eego in ay tahay dalka ugu weyn ee ku yaala galbeedka Europe, waxa macno u safar tareen. Dowladda Faransiiska ayaa maal khadadka-xawaaraha sare (Ligne a Grande Vitesse…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Tiyaatar caanka ah ee Europe waxaa leh tolmo wanaagsan galay dhar dhaqanka Yurub. tiyaatarada caanka ah ee Europe idiin Yaboohi qaab aan caadi ahayn. Waxay kaa tegi doonaan adigoo kiciyey, dhaqaaqay iyo spellbound! dabiiciga ah ee fanka waa soo Dagdagaysa iyo hal-abuur dushaan ka jirto. Hillaacyadan dhalaalaya ayaa sii jira…
Halkeen ka heli karaa Goobaha Left shandadaha In France?
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo France waxay hoy u tahay kumanaan ka mid ah soo jiidashada. Laga soo bilaabo mid taariikhi ah Eiffel Tower in Paris si ay xeebaha pebbled ee Nice, dalka waxyaalo aan dhammaadka lahayn in ay sameeyaan. Laakiin waxa haddii aad booqasho ku Layover a, or you have already checked out of your hotel…
10 Days faahfaahin In Bavaria Germany
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Haddii aad hadda uun bilowday qorsheyneysa safar marayo Bavaria ee Germany, aad u badan tahay in fikirka ku saabsan faahfaahin ah. Waxaad u badan tahay dabooshay tirada sheer meelaha la yaab leh in ay booqasho. Plus, aad rabto in aad iyaga ku habboon oo dhan in a 10 maalmood faahfaahin…